နှစ်သစ်ကူး နေ့ အားလပ် ရက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အမြန် ပေးပို့ သည့် အထုပ် အရေအတွက်သည် သန်း ၉ ၆၀ အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၆. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။ - Pandaily
နှစ်သစ်ကူး နေ့ အားလပ် ရက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အမြန် ပေးပို့ သည့် အထုပ် အရေအတွက်သည် သန်း ၉ ၆၀ အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၆. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။
Jan 04, 2022, 19:20ညနေ 2022/01/07 09:56:59 Pandaily
တရုတ် အမျိုးသား စာတိုက်အင်္ဂါနေ့က အစီရင်ခံ သည်မှာ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း အမြန် အထုပ် ပေါင်း သန်း ၉ ၂၀ ကို ရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၂. ၆% တိုးတက်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စုစုပေါင်း အမြန် အထုပ် သန်း ၉ ၆၀ ကို ပို့ဆောင် ပေးခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၆. ၅% တိုးတက်ခဲ့သည်။
အစိုးရ၏ “၁၄ နှစ် ငါးနှစ် စီမံကိန်း” အရ ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် စာတိုက် လုပ်ငန်း၏ နှစ်စဉ် စီးပွားရေး ၀ င်ငွေသည် ၁. ၈ ထရီလီယံ ယွမ် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈. ၂ ဘီလီယံ ခန့်) ထက်ကျော်လွန် မည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ စာတိုက် လုပ်ငန်း၏ နေ့စဉ် ၀ န်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူ သန်း ၉၀၀ ကျော်နှင့် အမြန် ပို့ဆောင် ရေးလုပ်ငန်း သည် ၁၅၀ ဘီလီယံ ကျော်ရှိပြီး နှစ်စဉ် စီးပွားရေး ပမာဏ ၂၀ ဘီလီယံ သို့မဟုတ် နှစ်စဉ် စီးပွားရေး ဝင်ငွေ ၂၀၀ ဘီလီယံ ကျော်ရှိသည်။
ယခင်က ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ စာတိုက် နှင့် အမြန် ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီများသည် စာတိုက် (အမြန်) သန်း ၄ ၆၀ ကို ရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၀% ကျော် တိုးတက်ခဲ့သည်။
‘Double Eleven Shopping Festival’ (နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် ကိုရည်ညွှန်း သည်) သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ် အမြန် ပေးပို့ ရာသီ ၏အ ထွတ် အထိပ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် (နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်မှ ၁၆ ရက်) ကာလအတွင်း နိုင်ငံတစ် ဝှမ်း ရှိ စာတိုက် နှင့် အမြန် ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီများ သည်စုစုပေါင်း စာပို့ အထုပ် ၆. ၈ ဘီလီယံ ကိုလက်ခံ ရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၈. ၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် စုစုပေါင်း အမြန် အထုပ် ၆. ၃ ဘီလီယံ ကိုပေးပို့ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၆. ၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:China Post သည် ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် နေ့စဉ် ပို့ဆောင် ရေးလုပ်ငန်း သည် ဘီလီယံ ၁၅၀ ထက်ကျော်လွန် မည်ဟု ခန့်မှန်း ထားသည်